NEWS Archives - Page 157 of 157 - SPORTS MYANMAR
တိုက်ကြီး5ခုမှာ ပထမဆုံး ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ စံချိန်ကို ရယူပြလိုက်တဲ့ ဟွန်ဒါ
ဂျပန် ကွင်းလယ် ကစားသမားကြီး ဟွန်ဒါ ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ မြန်မာ ဘောလုံးချစ် ပရိသတ်တွေ နဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက် စရာ မလိုတော့တဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘောဒီယား အသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ တာဝန် ကိုလဲ ရယူထားသလို ၊ ကစားသမား ဘဝကို လဲ ဆက်လက် ဖြတ်သန်းနေဆဲ …
CIES မှ ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဥရောပ တန်ကြေး အမြင့်ဆုံး ကစားသမား စားရင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အသင်း 20
အသင်း တွေရဲ့ တန်ကြေး ၊ ကစားသမား တွေရဲ့ တန်ကြေး တွေကို အမြဲလို ဖော်ပြ ပေးနေ ခဲ့တဲ့ CIES ကတော့ ဒီ တစ်ကြိမ် မှာ ဥရောပရဲ့ တန်ကြေး အမြင့်ဆုံး ကစားသမား စာရင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အသင်း 20 အမည် ကို ထုတ်ဖော် ကြေငြာ …
စီနီယာ အသင်းကြီးရဲ့ 35% ထိ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဗလင်စီယာ နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းများ
• ဖလာမင်ဂို အသင်းကို ကိုပါလီဘာတေးဒိုးစ် ဖလား နဲ့ ဘရာဇီး အမှတ်ပေးချန်ပီယံ ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြထားတဲ့ နည်းပြ ဂျီးဆပ်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလပ်အသင်းဟာ နည်းပြကြီး ရဲ့ ကျန်မာရေး အခြေအနေကို ပိုပြီး သေချာစေဖို့ အတွက် ၊ ဒုတိယ အကြိမ် ဆေးစစ်မှုးတွေ ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ …
Heartbreaking News : ဘောလုံးလောကထဲမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ စတင်ရှိလာခဲ့ပြီ
March 16, 2020 March 17, 2020 - by Editor
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ဟာ ပိုမို ကြီးထွား လာတော့မှာ သေချာ ပါတယ် ။ စတင် ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ တရုတ် နိုင်ငံ မှာ သက်သာ ပျောက်ကင်းသူ အရေ အတွက် များပြား လာခဲ့ ပေမယ့် ဥရောပ ၊ အထူး သဖြင့် အီတလီ မှာ …
2019-20 ရာသီနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကစားသမားတွေ ဘက်က ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဘီဂိုဗစ်
ကစားသမားတွေ ဘက်ကတော့ ရာသီ ပြီးဆုံးအောင် ကစားဖို့ အတွက် အဖြေရှာရန် ဘောလုံးလောကရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တိုက်တွန်း နေကြပါတယ်။ လက်ရှိ အေစီမီလန် အသင်းမှာ အငှား ကစား နေတဲ့ ဘုန်းမောက် ဂိုးသမား ဖြစ်သူ အက်စ်မာဘီဂိုဗစ် ကလည်း လူအများစု ယူဆထားကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ ဥရောပ ရဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲ …
ချီလီ လိဂ် ကို ရာသီမကုန်ခင် ရပ်နားလိုက်စဉ်က ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲ ? ဘယ်သူ ဖလား ရခဲ့သလဲ ?
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွေ ကို ရပ်နား လိုက်ရ အပြီး မှာတော့ တာဝန် ရှိသူတွေ ဟာ ဘာဆက် လုပ် ရမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းခဲ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် သတင်း မီဒီယာ အားကောင်း တဲ့ …